kandidà Ravalomanana : Mirohotra izay tsy izy ireo mpanohana
04/12/2018 admintriatra 0
Mahafaly Solonandrasana Olivier Isan’ny kandidà nifaninana tamin’ny fihodinana voalohany i Mahafaly Solonandrasana Olivier, sady praiminisitra teo aloha ihany koa. Omaly maraina dia nitafa mivantana tamin’ny kandidà laharana faha-25 ny tenany, ary nanambara tamin’ny fomba ofisialy …Tohiny
Fanalana ny fakon’Antananarivo : Tsy afaka niandry ny SAMVA ny CUA
Herinandro taorian’ny antso nataon’i Ravalomanana Marc tamin’ ny minisiteran’ny Rano, izay miandraikitra mivantana ny SAMVA, amin’ny tokony hanalana ny fako rehetra eto an-drenivohitra. Tsy afaka niandry ny tsy hanao ny kaomina, ka avy hatrany dia …Tohiny
Fanafihana “épicerie” teny Anosibe : Vola 50 Tapirisa Ariary voaroba
Lasa fiainana andavanandron’ny olona ankehitriny ny fanafihana mitam-piadiana. Toeram-pivarotana enta-madinika iray etsy Anosibe no notafihan’ny jiolahy miisa efatra, nirongo fiadiana mahery vaika toa ny basy poleta, miaraka amin’ny sabatra, ny antoandron’ny sabotsy lasa teo, tokony …Tohiny
Fanadiovana ny tanàna : Napetraka isaka ny boriborintany ny “bac be”
Manoloana ny tsy fahampian’ny dabam-pako, ka mampivangongo ny fako eran’ny tanànan’Antananarivo dia nanapa-kevitra nanamboatra “bac be” ihany koa ny kaomina Antananarivo Renivohitra, na dia efa nanome kamio ny Samva handraofana ny fako aza. Izany hoe, …Tohiny
COMESA : Nahazo sitraka noho ny fahaizany nitantana
Taorian’ny dimy taona nisian’ny krizy teto amin’ny firenena dia maro ny ezaka nataon’i Madagasikara tamin’ny famerenana indray ny tanjaky ny toe-karena malagasy. Tamin’ ireo asa maro notanterahina dia niverina tsikelikely indray ny fahatokisan’ireo mpiara- miombon’antoka ...Tohiny